Ab kumatilasi Pad Abakhiqizi - China Mattress Pad Suppliers, Factory
I-100% Ukotini Wokududuza Ukotini
Sihlale sibeka ukugcizelela okukhulu kuzinga. Futhi sinoxhaxha lohlelo lapho singaqinisekisa ikhwalithi. Sinezinyathelo ezinhlanu phakathi nenqubo kufaka phakathi izinto ezibonakalayo, ukuthunga, imikhiqizo eqediwe, ukuqeda, ukupakisha, nokufaka amaloli. Isinyathelo ngasinye sine-QC yokulawula ikhwalithi. Ngokuqondene nemikhiqizo engafanelekile, sizoyilungisa ize ifaneleke. Singaqinisekisa ukuthi singanikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo enhle kakhulu kuwe.
Izinzuzo zekhava kumatilasi: nqaba umsindo, wenqabe uthuli, uvikele umatilasi wakho, uvikele isikhumba sakho, elungele asebekhulile, izingane, izilwane ezifuywayo zomndeni ongazisebenzisa. Ilungele kakhulu ihhotela, ukusetshenziswa kombhede esibhedlela
70GSM Microfiber + 70GSM Filling + 40GSM non-woven. Isikhwama se-PVC esinamakhadi wokufaka anemibala namakhadibhodi, noma njengesicelo sakho 1pc / isikhwama. Ama-pcs ayi-100 / umbala wesitoko osayizi abaxubekile, amasethi ama-500 / umbala wangokwezifiso ngosayizi oxubekile, wamukela isampula oda.